Ko Wai ~ Journey-Assist- Review. Hanao inona. Ahoana no hahatongavana any
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Nosy Koh Wai
Nosy Wai Wai
21 martsa, 2020
Famintinana momba an'i Koh Wai
Ny Nosy Koh Wai dia ao anatin'ny nosy archipelago, izay hita ao amin'ny Hoalan'i Thailand. Ara-pitondrana, dia ao amin'ny faritanin'i Trat Thailand. Koh Wai koa dia tafiditra ao anatin'ny Koh National National Park (izay ahitana koa ny nosy kely sy ny nosy lehibe any Chang).
Dimanjan'i Koh Wai
Ny nosy dia manodidina ny 6 km ny halavany ary 1,5 km ny sakany. Manodidina ny 3,9 metatra toradroa ny faritra misy azy. km.
Koh Wai no misy 10 km miala amin'ny Koh Chang Island. Ilay nosy voalohany dia tsy misy lalana fitaterana, atahorana ary lalana.
Misy ny fasika any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Ko Wai. Manakaiky ny ranomasina ny vatohara. Ny morontsiraka an'i Ko Wai dia rakotra lohasaha izay misy hazandrano maro be. Ny zavamaniry amin'ity nosy ity dia asehon'ny ala alaala.
Nosy Koh Wai eo amin'ny sarintany
Zavatra tokony hatao ao Koh Wai
Eto ianao dia afaka mankafy fasika fotsy, rano ranomasina madio, karazana corals, trondro ary solontenan'ny biby an-dranomasina. Ny tena zava-dehibe dia ao akaikin'i Koh Wai, trondro minke, hita akaikin'ny torapasika sy marinas. Azonao atao mihitsy ny mikarakara mofo azy ireo.
Amin'ny andro mazava, ny ranomasina dia hita amin'ny halalin'ny 20 m.
Noho ny habeny kely dia afaka mandehandeha manodidina ny perimeter ao anatin'ny antsasaky ny andro i Ko Wai. Amin'ny lafiny andrefany, ny torapasika dia mifandray amin'ny alàlan'ny tetezana vita amin'ny hazo.
Toerana malaza amin'ny sarintany nosy Koh Wai +
Sarintanin'ny Nosy Koh Wai
Anisan'ireo mpizahatany, ny malaza indrindra dia ny morontsiraka atsimon'i Ko Wai, izay misy torapasika lava be sy haran-dranomasina. Isan'andro dia tonga eto ny sambo ary feno mpizahatany mandinika ny haran-dranomasina sy milentika amin'ny masaly. Any amin'ny lafiny atsimo, 50 metatra miala an'i Koh Wai no lehibe indrindra amin'ny vatohara manodidina ny nosy.
Ny morontsiraka avaratra koa dia misy torapasika miampita eo. Ny fotodrafitrasa amin'ity faritry ny nosy ity amoron-dranomasina no manankarena, misy trano fandraisam-bahiny maro, ary samy manana ny trano fambolena azy sy lakana tokana ny tsirairay avy. Afaka mandeha haingana amin'ny hotely iray mankany amin'ny iray hafa ianao.
Snorkeling, kayaking, volley ball, frisbee - ireo no hetsika azon'ny mpizaha tany ao Koh Wai.
Fandresena ao amin'ny nosy Koh Wai
Rahoviana no fialan-tsasatra tsara indrindra any amin'ny nosy Ko Wai. vanim-potoana
Ny fandehanana mankany amin'ity nosy ity dia tsy misy dikany afa-tsy amin'ny vanim-potoana maina (manomboka amin'ny volana novambra ary mifarana amin'ny aprily), satria amin'ny fotoanan'ny orana dia mihidy eto daholo ny hotely sy ny trano fandraisam-bahiny. Tsara kokoa ny misoroka ny fialantsasatra - Taom-baovao sy ny nasionaly Thai, satria amin'izao fotoana izao dia be hipoka loatra i Koh Wai.
Ny ankamaroan'ireo mpizahatany dia tonga eto maraina amin'ny andro vitsivitsy ary miala amin'ny ora hariva. Noho izany, dia be hipoka eo amin'ny maraina izy ary milamina hariva.
Fotodrafitrasa Koh Wai Island
Tsy misy toeram-ponenana maharitra ao Koh Wai, ny foto-drafitrasa dia saika tsy eo. Vitsy ny toeram-panorenana izay manome trano fonenana amin'ny endrika bungalows. Isan'andro dia misy ferry sy boaty hafainganana mampifandray an'i Ko Wai amin'i Ko Chang, Ko Mak ary ny tanibe. Ny fitsidihana ity nosy ity dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pizahan-tany maro, ny nanombohan'i Koh Chang. Noho izany antony izany, Koh Wai dia be olona mandritra ny andro. Ny seranan-tsambo, dia ny sambo miala an'i Koh Wai avy ao Koh Chang, eo akaikin'ny tanànan'i Bang Bao.
Tsy misy ny fivarotana toy ny any amin'ny nosy, ankoatra ny fivarotana kely any amin'ny Hotely Koh Wai Pakarang.
Ny vidin'ny ankamaroan'ny kafe any Koh Wai dia farafahakeliny avo telo heny noho ny vidiny amin'ny trano fikarakarana kateranana ao Koh Chang sy Pattaya.
Ahoana ny fomba hidirana any amin'ny nosy Koh Wai. vidin'ny
Afaka milomano mankany Ko Wai avy amin'ny nosy akaiky indrindra - Ko Maka, Koh Chang и Ho aiza. Ny boaty hafainganana dia mihazakazaka isan'andro eo amin'ireo nosy rehetra - fiara sambo hafainganam-pandeha. Tapakila ho azy dia azo amidy eny amin'ny seranana alohan'ny hidirana. Na avy any Koh Chang dia afaka mandeha eny Koh Wai ianao amin'ny sambo mitsangatsangana na anaty sambo manofa mitokana.
Sarintanin'ireo moorings ao amin'ny Koh Wai
Manomboka any Koh Chang ka Koh Wai
Sambo mandeha haingam-pandeha izay mandeha any Koh Chang mankany Koh Wai ary miverina isan'andro. Avy ao Koh Chang izy ireo dia hiala amin'ny 9.30 ary 12.30. Nandoa 400 baht ($ 13) ny dia iray.
Ao Koh Wai avy any Pattaya
Ankoatra izany, avy amin'ny seranan-tsambo Laem Ngop, izay hita ao amin'ny tanibe (akaikin'ny tanànan'i Trat), indray mandeha isan'andro (amin'ny 1 ora hariva monja). Avy any amin'ny Laem Sok berth, miala kely ny sidina mankany Koh Wai indroa isan'andro - amin'ny 16 sy 11 ora. Araka izany, afaka mihazo an'i Koh Wai avy any Pattaya ianao. Mba hanaovana izany, dia makà minibus iray izay miala any Pattaya mankany amin'ny Laem Ngop na Laem Sok berth (mitentina 14 baht, izay mitentina 450-14 dolara).
Avy amin'ny bangkok
Ao Bangkok koa dia afaka mandefa taksibe mankany Laem Ngop na Laem Sok (mety haharitra 5 ora ny dia).
Ao amin'ny nosy io dia misy berths telo, ny roa amin'ireo dia ao amin'ny faritry ny hotely, ary ny iray dia eo anelanelan'ny tranon'ny mpitsidika an'i Koh Wai Paradise sy ny Bungalow Tsara Filing. Ny boatin-tsambo hafainganam-pandeha dia mety mampidina anao amin'ny piera rehetra.
Torapasikin'i Koh Wai
Ny moron-dranomasina eto amin'ity nosy ity dia tsy misy anarana. Ny sasany amin'izy ireo dia hita ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy hotely. Ny tena mahazo aina dia ny moron'ilay hotely Koh Wai Pakarang.
Fonenana amin'ny Koh Wai
Tsy maro ny safidy momba ny trano ao Koh Wai. Ireto trano fandraisam-bahiny maro miaraka amin'ny bungalow izay tsy miara-miasa amin'ny loharanom-pandraharahana an-tserasera, ary ny trano fandraisam-bahiny iray ihany no misy ao amin'ny nosy dia Koh Wai Pakarangao amin'ny faritra atsimon'ny Ko Wai.
Any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Nosy, akaikin'ny morontsiraka, amoron-dranomasina lehibe indrindra any Koh Wai dia misy trano fandraisam-bahiny Ko Wai Paradiseizay manolotra bungalows teak tena tsotra izay misy eny amin'ny ala mikitroka. Tonga eo amoron-dranomasina io ny ankamaroan'ny mpizahatany mandritra ny andro. Ity ny hany trano fisakafoanana feno manerana ny nosy izay manolotra menu tena tsara miaraka amin'ny vidiny mirary. Teo akaikiny dia trano fandraisam-bahiny iray Bungalow tsara fikororohana. Izy no nitsangana tamin'ny Koh Wai talohan'ny trano fandraisam-bahiny sy hotely hafa. Ao amin'ny tapany avaratra-atsinanan'ny morontsiraka dia hotely Koh Wai Pakarang miaraka amin'ny trano fisotroan'izy ireo sy ny fivarotana kely iray.
Misy trano fandraisam-bahiny iray hafa amin'ity nosy ity Ao Yai Masomary kely. Misy bungalows fito amin'ny vidiny antonony, izay samy manana trano fandroana sy fandroana. Tsy misy Internet ao amin'ity tranokala ity, ary ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra no mandeha miasa amin'ny hariva. Io trano fandraisam-bahiny io dia mirehareha ny kafe mora indrindra ao amin'ny nosy, izay matetika mitsidika ny mpizahatany mipetraka amin'ny trano fandraisam-bahiny sy amin'ny hotely iray.
Vidiny ho an'ny trano fonenana ao Koh Wai
Raha mikasa ny hitady ny trano fandraisam-bahiny tokana any Koh Wai ianao dia mila manisy efitrano mialoha.
Raha miisa amin'ny trano fandraisam-bahiny ianao dia mila mitondra repellents, taratasy fidiovana, savony ary jiro mandrehitra.
Aza adino fa ao amin'ny ankamaroan'ny bungalows dia tsy misy ny fandroana sy ny trano fidiovana ary amin'ny telo amin'izy ireo dia omena herinaratra vitsy monja isan'andro (aorian'ny hilatsahan'ny masoandro).
Ny Internet tsy hita ao amin'ny trano fandraisam-bahiny rehetra eto.
Weather on Koh Wai anio + forecast